The Bitcoin Capital ™ - Iyo Yepamutemo App Webhusaiti 2022 [yakagadziridzwa]
Tora kutonga kweramangwana rako rezvemari ikozvino
Isu pachedu tinokukoka iwe kuti ubatanidze The Bitcoin Capital yekutengesa mhuri
Hezvino izvo vamwe vashandisi vanoti
“Kutenda kukuru kune The Bitcoin Capital - washandura hupenyu hwangu uye ini pakupedzisira handina chikwereti. Iyo software iri nyore kushandisa uye ndakatodzidza nzira yekutengesa senge pro. Basa guru!”
”Saamai vasina murume, masendi ese akakosha uye nekutenda The Bitcoin Capital, ndinokwanisa kupa vana vangu zvese zvavanofanirwa uye nezvimwe. Ndinokutendai nekundipa mukana wekukwanisa kuzviriritira.”
”Ini ndiri pro mutengesi uye nekutenda kune The Bitcoin Capital, ini pakupedzisira ndakwanisa kutengesa cryptos zvine pundutso. Hunyanzvi hwekuongorora hwesoftware hunoshamisa uye hwakarurama. Ndatenda nerubatsiro.”
Chinja hupenyu hwako nhasi
Wana mukana nekukasika
Bhalisa izvozvi uye uwane mukana wekukurumidza kune inotungamira Bitcoin otomatiki yekutengesa software
Nyoresa ruzivo rwako pazasi kuti uwane mukana ipapo kune The Bitcoin Capital mhuri - tanga kuwana nhasi